CHU GOB Befelatanana: hatokana ireo bevohoka mararin’ny covid-19 | NewsMada
CHU GOB Befelatanana: hatokana ireo bevohoka mararin’ny covid-19
Nohavaozina ny efitrano maromaro ao amin’ny hopitaly fiterahana Befelatanana hahafahana mandray an-tanana ireo reny bevohoka mitondra ny tsimokaretina coronavirus na ireo efa mararin’ny aretina covid-19 mihitsy, eny fa na ireo ahitana fambaran’aretina fotsiny ihany aza.
Nisy ny fiaraha-miasan’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka sy ny UNFPA nahafahana nanatsara ireo efitrano ireo. Tanjona ny hisorohana ny valanaretina amin’ny reny tonga manao fizaham-pahasalamana sy manaraka ny vohoka ary ireo miteraka ao.
Tafiditra ao anatin’ny sokajin’olona marefo rahateo ny reny mitondra vohoka ka mora handairan’ny aretina. Mila fitandremana manokana izy ireny, araka izany.
Hopitaly anisan’ny mandray mpiteraka maro ny etsy Befelatanana. Ao no misy ireo mpampivelona efa tena za-draharaha ary manana ny fitaovana ampy amin’ny fiatrehana ny fiterahana ka maro ireo renim-pianakaviana misafidy ny hiteraka ao. Matetika, mandray ireo saro-piterahana avy any ambanivohitra alavitra ihany koa ity hopitaly lehibe ity noho ny fananany traikefa amin’izany.